परराष्ट्रमन्त्रीको हतारो : आजै नियुक्ति, आजै न्यूयोर्क « Drishti News – Nepalese News Portal
६ आश्विन २०७८, बुधबार 10:47 am
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का नियुक्त भएका छन् । खड्का परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएको जानकारीसहितको पत्र राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीमा खड्कालाई नियुक्त गरिएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइएको छ । राष्ट्रपतिले आजै खड्कालाई मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेका छन् ।
कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्री खड्का आजै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाने कार्यक्रम छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको मंगलबार बसेको बैठकमा डा. खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।